トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Ama si loo ogaado in amaahatay lacag ah waxa ay tahay in shuruudaha in baaritaanka
Marka aad codsanayso caching, macaamiisha waa ku saabsan baaritaanka waa welwel leh.
waa ka badan aan ku gudbin imtixaanka in kasta oo ay xaaladda ka jirta dhibaato aan lacag ku filan, lacag aan la sara kicin kara.
Sidaas daraaddeed, bal aynu in ay ogaadaan ka hor ku saabsan xitaa wax yar in baaritaan ay u badan tahay sida, in degree waa qadar xad sare oo ah lacag ay go'aamiyeen baaritaanka.
, oo aan ii bixin dib hir lacag, doono jawaab u moneylenders khasaaraha.
Sidaas daraaddeed, kuwa hoose iyo kuwa kaas oo aan xasillooneyn dakhliga, waxay u badan tahay in la qaado oo la Wadaage khatarta sare ah xirfad leh ee farshaxanka.
Sidaas daraaddeed, fadlan sii riixaya, sababtoo ah waxaa ugu in aad leedahay shuruudaha ah sida soo socda ee moneylenders yahay. Sare iyo hoose ee dakhliga
: dhaladeeda sare waaweyn ee, dakhliga
hore noqon sare ku xiran tahay xadka dhabta hoose haddii hooseeyo ama deggan: Haddii aadan ku deggan, hoose xadka ama diido dib u eegista, oo deggan iyo in kiiska ugu dib loo eego hoos
ee fikradda ah in la kordhiyo xadka aan ku xaddidnayn dakhliga, ma garanayo waxa ay tahay barta ugu of sababtoo ah dakhliga waxaad laga yaabaa in sidoo kale mid ka mid ah.
Tani waa, dabcan, kuwa nidaamka mushaar bil kasta, sida wakhti buuxa iyo shaqaalaha ku meel gaar ah, waxa la go'aamiyey in uu jiro dakhli xitaa dadka ka shaqeeya saacadle ah, sida wakhtiga qayb-iyo shaqo waqti-dhiman.
Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha Dattari shirkadda qalin cusub, u muuqdaan baaritaanka ba'an iyo sidoo kale ama ahaa xagga qayb ka mid ah, sida by beddelo goobta marar badan noqon doonaa.
Isla sababtaas, waa in ka badan oo qofeed keli ah sidoo kale waa ay adag tahay sida baaritaanka. Waayo, lacagta
dakhliga, waxaa dib loo eegi doonaa adigoo soo gudbinaya sida jeegagga mushaharka ama warqada heyn.
In qayb ka mid ah maaliyadda macaamilka, haddii aanay jirin qalad goobta shaqada in lagu dhawaaqey, waxaa aan ka yarayn waa kiiska in la sii wado si ay baaritaanka xataa amaahashada oo aan haysan in ay soo gudbiyaan waraaqaha si ay u caddeeyaan dakhliga.
tixraaca / sii proof'll ogaado ka hor inta aadan amaahan lacagta tixraaca
/ < href a = "http: //xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/11th_hours.html "> caching
kuwa u baahan tahay waqti aad u soo amaahato lacag iyo
kala duwan ee lacag deyn
noqday ogeysiiyo ka nolol maalmeedka, haddii aan wax dhibaato ah ma xataa wax amaahisaan lacag, sidoo kale waa mid ka mid ah shuruudaha ee .
baaritaan tusaale ahaan marka la eego, mid ka mid ah iyo in uu yahay in meel in meel guriga, kuwaas oo soo noqnoqda, isbeddel shaqo la sameeyo si ay faa'iido ee imtixaanka waxaa suuro gal ah in Intaas waxaa sii dheer uga saartaan .
, marka lagu daro kuwan, haddii ay dhacdo in uu ahaa mid taariikhda shil, sida bixinta waxaa ku xayiran in mid ka mid ah iyo hay'adaha macluumaad credit in ay leeyihiin waayo-aragnimo ee amaahda ee la soo dhaafay, sida nin ka mid ah khatarta Flit laga yaabaa in aad la diiday lahaa in baaritaanka .
sidoo kale, haddii aad amaahashada codsiga in hay'adaha kala duwan dhaqaale ee muddo gaaban, waxaad noqon doontaa meel gaar ah amaahashada waxaa lagu sheegay .
Tani waa, shil Si ka duwan taariikhda sano, badh Diiwaangeliyey ku saabsan hal sano ka mar dambe ma doono, laakiin lacagtaas iyo sidoo kale fuliyaan codsiga dib u eegista dhexe ah, waa halis ah muddo in uu noqdo dheer dhacdaa .
Sayidka, Isku day in ay ku riday markii hal mar Marka aan diiday dib u eegista. haddii ay jirto taariikh sida shil
, si aad u arki kartaa ka qodob kasta hay'adda of xiriir ama homepage ha aad u ogaato in ay isu barbar .
xaaladda ilaa hadda amaahashada of
Xataa haddii ay jirto dhibaato ku
dusha dakhliga iyo dusha dhaqanka lahayn, this by ilaa borrowings, waxaa jira dib u eegis noqdo xaaladaha daran.
In sharciga hadda jira, maxaa yeelay waxa uu noqday xeer aan ka amaahan kartaa oo kaliya ilaa saddex-meelood meel ka mid ah dakhliga sanadlaha ah sida guud ahaan xeerka lacagta. Inkastoo su'aasha in
afka jiro hal dhibic waxaa la is weydiiyo, taxaddar maxaa yeelay, waxaa inta badan aan u sheegay oo sabab u ah imtixaanka.
Si kastaba ha ahaatee, in ay dhacdo kuwa ganacsatada shaqsi si aad u amaahatid sida lacag ganacsiga, waxa ay noqon doontaa meel ka baxsan baaxadda guud ee xeerka lacagta.
Intaa waxaa dheer in ay, kuwa shirkadaha iyo, maxaa yeelay, damiin sida amaahda shakhsiyeed in la doonaa in aan la daboolay, haddii, in ay dhacdo amaahda ayaa lagu sheegay by wadarta guud ee xeerarka, xaaladaha by bixinta guryaha dhab ah oo damiin waxaad awoodi doontaa inaad nadiifiso noqon doonaa.
ay ka mid yihiin maaliyadda macaamiisha, si baaritaanka si ay lacag uga hay'adaha maaliyadeed amaahan, macluumaad ah "qof fulinaya codsiga," sida dakhliga iyo dhaqanka yeelan doonaan in ay sameeyaan. Xitaa amaahiyay lacag
, haddii la go'aamiyo in xaaladda, taas oo waxa la siin karaa fasax aan la marin habaabiyay dhexe, baaritaan ayaa sidoo kale dhex mari doonaa oo aan wax dhibaato ah.
Dhanka kale in, rabto in aad amaahato lacag ee gobolka, taas oo xaaladda hadda iyo hore aan la arki karin, ama hal mar la go'aamiyo in kaliya ma ahan sameeyo qorshe bixinta caddayn, waxaa sidoo kale marar badan sheegay waa in ay noqdaan kiiska marxalad ka mid ah dib u eegista document.
Waayo amaahashada xaaladda, xitaa haddii ay fuliyeen codsiga in hay'adaha kale ee dhaqaale, hay'adda macluumaad credit ayaa la wadaago macluumaadka.
haddii, sidoo kale waxay fursad u leeyihiin in ay isku dayaan si loo xaqiijiyo waxaa laga yaabaa in lagu tilmaamay in nooc ka mid ah macluumaadka haddii aad ku dhacay imtixaanka. Oo
sida saxda ah, haddii aad iskudaydid qorshe nidaamsan u bixinta lacagta ah, waa in aad noqon inaad soo amaahato lacag ah sida la doonayo. Oo ay ku jiraan
maaliyadda macaamiisha, si baaritaanka si ay lacag soo amaahato ka hay'adaha maaliyadeed, macluumaad ah "qof fulinaya codsiga," sida dakhliga iyo dhaqanka yeelan doonaan in ay sameeyaan. Xitaa amaahiyay lacag
sida saxda ah, haddii aad iskudaydid qorshe nidaamsan u bixinta lacagta ah, waa in aad noqon inaad soo amaahato lacag ah sida la doonayo.